Tonga izao ny fotoana lehibe hanovantsika ny tantaran’ny Firenena.
Andao ary hifidy ny ho avy, ny fandrosoana, ny fahazavana sy ny firaisan-kina. Entano ireo rehetra miandrandra fivoarana, ireo rehetra manana fitiavana ao aminy hifidy ny N13
Mivonòna, mitsangàna ary arovy ny safidinao fa isika rehetra hanavotra an’i Madagasikara
Ny 75% ny mponina eto Madagasikara dia ankizy sy tanora avokoa.Isaorana manokana ireo ankizy nanasa ahy tamin'iny fandarahana "demokrakizy" iny. Ianareo rankizy no ho avin'ny firenena. Mila misitraka ny zony avokoa ny ankizy na sahirana izy na manana fahasembanana. Izaho dia ho Filoha hitsinjo manokana ny tanora sy ny vehivavy.
IZAHO DIA HO FILOHAM-PIRENENAN' NY MALAGASY REHETRA.
Misaotra anareo vahoaka an'Antananarivo aho noho ny firaisankina sy ny fanohanana nasehonareo tamin’ny diabe notanterahintsika. Fantatro fa tia ahy ianareo, izaho koa tia anareo. Hifanohana isika. Andao ary hifidy amin’ny faha 19 desambra 2018 izao.
AFAKA ROA ANDRO DIA HIOVA NY TANTARAN’NY FIRENENA.
Tsy diso fanantenana mihitsy aho isaky ny mandalo eto Mahajanga. Efa tsapako sy fantatro loatra ny fitiavanareo ahy. Ho valim-pitia ho anareo hanangana orinasa manamboatra simenitra aho eto an-toerana. Hanampy ny tanora tsy an’asa aho, hitsinjo ny vehivavy, ny malagasy rehetra.
Androany, voaporofo hatrany fa mifankatia isika.
IZAHO SY IANAO, ISIKA HANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA.